Machị 8: March ga-emechi na Madrid - Thewa Machị
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Machị 8: March ga-emechi na Madrid
18 / 03 / 2020 15 / 03 / 2020 site Antonio Gancedo
MAC 8: NDBNDRND 2WA nke abụọ nke udo na udo na - eme ka ya dabie na MADRID
Ka ubochi 159 gachara elu uwa bu ihe ndi nlere na obodo 51 na obodo 122, na - arusi elu ihe isi ike na otutu ihe mere, ndi isi ala 2M World March O mechiri njem ya na Madrid na Mach 8, ụbọchị a họọrọ dịka ụtụ na ngosipụta nke nkwado maka ọgụ ụmụ nwanyị. Ememe mbata ahụ site na ihe omume dị iche iche n’agbata Mach 7 na 8.
Satọde, Machị 7: site na Vallecas ruo Retiro
Orningtụtụ ụtụtụ Ebe Omenala del Pozo na agbata obi Vallecas, egwu ejima n'etiti Úlọ akwụkwọ Núñez de Arenas, Ogwuru egwu Pequeñas Huellas (Turin) na Manises Cultural Athenaeum (Valencia); otu narị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị mere iberibe egwu dị iche iche, na ụfọdụ abụ rap.
Tupu ndị na-ege ntị ezigara site na ezinụlọ na ndị enyi, yana ihe osise dị na nzụlite nke akara mmadụ nke Udo na Ọgba aghara, Rafael de la Rubia weere ala na-echeta na e mewo akara ngosipụta mbụ nke mmadụ n'ụlọ akwụkwọ Núñez de Arenas nakwa na ejima sitere na nkwadebe maka World March; O kwuru na n'ime ya ọ hụkwala n'ọtụtụ ebe ụmụ nwoke na-eji rap dịka otu ụdị egwu ga - ejikọ ya na ndị na - eto eto. Mgbe ahụ, ọ gbara ndị okenye ume ka ha toaa ntị na ndị na-eto eto ahụ na-egosi ụzọ na ụkpụrụ ọhụrụ, dị ka ilekọta gburugburu ebe obibi na ịdị n'otu na ibe ha.
N'ehihie, mmechi mmechi nke “onye ọchịchị” nke Mach mere na Nnukwu ụlọ nzukọ Arab na nso ogige Retiro. Ndị bịara ya gbara ajụjụ ọnụ n'ọnụ ụzọ dị ọnụ ụzọ ihe dị iche iche enyere ndị otu egwuregwu n'oge Machị, dịka igbe akpa akwụkwọ nwere eserese nke ụmụaka na-eto eto kwabatara na Rome site na mba dị iche iche n'Africa, na-agafe Mediterenian.
Mgbe okwu ekele ole na ole nye Casa Árabe, Martina S. nabatara ndị bịara, ụfọdụ sitere India (Deepak V.), Colombia (Cecilia U.), Chile (Lílian A.), France (Chaya M. na Denis M.) (tali (Alessandro C., Diego M. na Monica B.), Germany (Sandro C.), gụnyekwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị enyi na-enweghị ike ịbụ anụ ahụ n'ihi visa ma ọ bụ nsogbu ahụike gbasoro nnọkọ ahụ site na nkwanye. . Rafael de la Rubia buru ụzọ nyochaa nyocha nke otu nke abụọ nke abụọ MM si pụta na ihe metụtara ya na nke mbụ wee cheta usoro nke ha.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ndị nnọchi anya mba si kọntinenti ise ahụ kwupụtara maka ihe omume kacha mkpa mere n'oge njem ahụ na gburugburu ya. Emejuputara ihe nile site na ekwuru, ihe ngosi, ihe onyonyo ya na itinye ozi vidiyo site na obodo di iche iche, na - ebute otutu ihe ndi mmadu n’enye ikike ma ndi otu na ndi oru.
Na mmechi, ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị mere na ndị ọrụ kwuru, ndị nke nwere ọkwa dị iche iche ziri ezi, ebilitela na njem:
Ejikọtara n'etiti ebe agụmakwụkwọ. Kọleji na Mahadum.
Mbipụta nke akwụkwọ March: a) Akwụkwọ ndị akọwapụtara nke ụlọ obibi akwụkwọ Saure nwere ọtụtụ usoro mmachi nke MM; b) Akwukwo nke 2 mm, ichikota ihe emere na c) Egwuregwu Goose nke MM
Nkwupụta nke mmasị obodo ma ọ bụ ọdịmma ọdịmma nke MM na ọkwa ọchịchị na nke mpaghara.
Mgbasa Ozi "Osimiri Mediterenian, Osimiri Udo" na-ekwuwapụta obodo dị ka Embass nke udo. Omume ọzọ na Osimiri Adriatic.
Senegal (Thiès): Nzukọ "Africa chere ime ihe ike ike"
Maachị Latin nke March maka Emeghị Ihe Ike2021 na San José, Costa Rica, ebe ụzọ abụọ ga-esite site na ugwu na ndịda kọntinent.
Ọgbakọ "Pmụ nwanyị na-abanye ndụ ” na Argentina (Tucumán)
Mgbasa Ozi "Ka anyị rụọ ọrụ Udo Na Nepal / India / Pakistan
Ntinye aka na nchikota nke Ndị Ulo Nobel Nobel (Nnọkọ ọnụ ọnụ ahịa udo nke Nobel)na South Korea (Seoul).
Iso na ogbako na akụrụngwa nke Nuclear nke Ụlọ Nche Udo Ụwa na enwere ike ikwekọrịta ya na Guterres, Secretary General nke UN na USA. (New-York)
Ememe ememme iji mee ememe nke TPAN na Japan (Hiroshima).
Ihe nlere maka ime ihe ike na Curitiba na kọmitii na-adịgide adịgide maka Nonviolence ... na Brazil.
Emechiri ihe omume a mechiri ọnọdụ ahụ, na-akpọ onye ọ bụla ka uche ya banye na nje nke ime ihe ike.
Marchbọchị Sọnde Mach 8: Puerta del Sol, Km.0 na akara mmadụ
Site na elekere 11:00 nke ụtụtụ ụtụtụ ballet a na-amaghị ama mere na Puerta del Sol n'ihu Km.0 na-adọta uche nke ndị na-agafe agafe-site. Otu ndị na - akwalite Real Madrid na ndị enyi ole na ole, rutere ụbọchị gara aga site na Brussels na Tangier, nọ na-edobe ọkọlọtọ stereo na enweghị nsogbu ebe a na-egosipụta ngosipụta nke ime ihe ike na ala. E mebere gburugburu nke ndị nwere mmasị wee malite ịgagharị. Marian, si "Womenmụ nwanyị na-eje ije udo"Ọ dọrọ uche gaa na ụda nke ilu ahụ na ihe ihe ahụ mere n'ụbọchị ahụ ma nye Rafael de la Rubia ala: "… Ka ụbọchị 159 gachara, anyị ga-emechi ememme ọnwa abụọ nke abụọ a maka Udo na Ọgba aghara.
N'oge a MM na-eme ihe omume na mba iri ise na karịa obodo 50 ma nweela ndị otu egwuregwu, nke enwere ọtụtụ ndị nọ na ya, nke ụwa nọ na-emegharị ... Mbugharị a sitere n'ike mmụọ nsọ ndị nne na nna nke anaghị eme ihe ike. ndi buru ayi ụzọ, onye anyị kwanyeere ugwu: M. Gandhi na Sevagram Ashram (India) na Silo na Punta de Vacas Park (Argentina), n'etiti ndị ọzọ… ”. Mgbe o kelechara ndị bịara ya, ọ kpọrọ mmadụ niile ka ha sonyere ọrụ ahụ ¡¡¡Marchbọchị nke atọ !!! Afọ ise site ugbu a, na 3.
Encarna S. site na Njikọ nke istmụ nwanyị Ndị Na - ahụ Maka Ọchịchị, rịọsiri arịrịọ ike maka ọrụ nke ụmụ nwanyị maka ụwa na - anaghị eme omume ọma. “Ugbu a bụ oge ụmụ nwanyị na-ebili, ndị nwere ọdịdị anyị ma nyefee ndụ ha. Anyị na-ekwuputa na a na-eyi ndụ egwu, na a na-eyi ihe egwu egwu na mmadụ, anyị wepụtara onwe anyị na nchedo ya. Site na taa anyị na-akpọ nraranye na nchekwa nke ndụ, na -eme ka nkekọ mmekọrịta, na -emepụta netwọkụ: netwọkụ nke ịdị n'otu, nlekọta, netwọkụ mmadụ site na nwanyị. Ka anyị wee nwee ike ịlaghachi n'echiche banyere ụdị osisi, ihe ndekọ na mmadụ niile bụ otu ”
Followinggbaso usoro izizi e mere na mbụ, ìgwè abụọ abanye n'usoro n'otu mkpanaka abụọ ma kwaga n'okporo ụzọ dị na ala ruo mgbe ha haziri akara ngosi nke Ọgba aghara. Na akara ngosi ekwenyero, bulie kaadiboodu ọcha na odo odo, na-egosi etu, si n’etiti odo odo, ndi nwanyi na agbasa enweghi obi ojoo. Edere ya n’elu onyonyo a ka nwere ebe ncheta ihe omume. Participantshapụ ndị nnọchi anya ahụ so ndị ọzọ kerịta ọ joyụ.
Emechaa, Machị emechiri emechi ọnwa 148 puku. gburugburu ụwa na otu Km.0 ebe ọ hapụrụ ụbọchị 159 gara aga.
N'ehihie, ndị na-eme ihe ngosi nke 2 MM sonyere na ngosipụta nkwonkwo nke nwanyị 8M.
Ha bụ ụbọchị ụka zuru oke ma nwekwaa mkparịta ụka n'etiti ndị si mba na agbụrụ dị iche iche, dịrị njikere ịnọgide na-emekọ ihe n'ọdịnihu. Ihe akaebe nke a bụ na -echi ya na - ewere ọnọdụ na nzukọ ezighi ezi iji gosipụta ọrụ ndị a Maachị Latin nke March maka Emeghị Ihe Ike na mkpọsa ahụ Oke Osimiri Mediterenian ...
Ide: Martine SICARD si World enweghị agha na enweghị Ime Ihe Ike
Foto: Pepi na Juan-Carlos na, Deepak, Saida, Vanessa,…